कसरी Adobe Media Encoder नि: शुल्क र कानूनी रूपमा प्राप्त गर्ने
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Media Encoder नि: शुल्क
Adobe Media Encoder नि: शुल्क
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2021-12-03, Nepali Blog
संगत: Windows, macOS
Adobe Media Encoder नि:शुल्क प्राप्त गर्न र कानूनको समस्याबाट बच्न सम्भव छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन इच्छुक हुनुहुन्छ? अहिले लाइसेन्स किन्न सकिँदैन? यस पोष्टमा, म एडोब मिडिया एन्कोडरको पूर्ण संस्करण नि: शुल्क डाउनलोड गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो तरिकाहरू कभर गर्नेछु।
Adobe Media Encoder नि: शुल्कका फाइदाहरू
अन्य Adobe उत्पादनहरूसँग एकीकृत
धेरै कोडिङ विकल्पहरू
निर्माण गर्न सक्षम प्रिसेटहरू
फाइल ढाँचाहरूको विशाल दायरालाई समर्थन गर्दछ
मलाई Adobe Media Encoder किन चाहिन्छ?
यो कार्यक्रम Adobe भिडियो सम्पादन सुइटसँग सम्बन्धित छ। यो उपयुक्त ढाँचामा भिडियो फाइलहरू इन्कोड गर्न प्रयोग गरिन्छ, यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तिनीहरू यी दिनहरूमा विभिन्न उपकरणहरूमा सजिलै प्ले हुनेछन्।
के Adobe Media Encoder सधैंको लागि निःशुल्क छ?
प्रिमियर प्रो र After Effects को भागको रूपमा स्थापना गरिएको छ। यो कार्यक्रम अलग किन्न असम्भव छ। क्रिएटिभ क्लाउड पूर्ण योजनाका सदस्यहरूले पनि यो प्राप्त गर्छन्।
CC मूल्यहरू हेर्नुहोस्
के नि:शुल्क परीक्षण उपलब्ध छ?
हो, Adobe ले नि:शुल्क परीक्षण संस्करण प्रदान गर्दछ जुन ३० दिनसम्म रहन्छ।
के Adobe Media Encoder Windows र Mac सँग समान रूपमा उपयुक्त छ?
हो, कार्यक्रमले दुबै OS मा काम गर्नेछ।
पाइरेटेड एडोब मिडिया एन्कोडर संस्करणहरू प्रयोग गर्ने असुरक्षाहरू
आजकल, धेरै प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय रूपमा पाइरेटेड साइटहरूबाट प्रोग्रामहरू डाउनलोड गर्दै छन्। तिनीहरू दाबी गर्छन् कि इजाजतपत्र संस्करणहरूको लागि मूल्यहरू धेरै उच्च छन् जबकि पाइरेटेडहरूलाई कुनै प्रयास वा पैसा लगानी आवश्यक पर्दैन। तर अन्ततः, यसले धेरै नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ जुन मानिसहरूलाई थाहा छैन। मैले तल केहि सबैभन्दा गम्भीर व्यक्तिहरूलाई वर्णन गरेको छु।
यदि तपाइँ मिडिया एन्कोडरको एक अवैध संस्करण नि: शुल्क प्रयोग गर्दै समात्नु भयो भने, आपराधिक जिम्मेवारी वहन गर्न तयार हुनुहोस्। उदाहरण को लागी, अमेरिका मा, बौद्धिक चोरी को लागी5बर्ष सम्म कैद र $ 250,000 जरिवाना हुन सक्छ। साथै, प्रतिलिपि अधिकार भएकाहरूले अदालतमा दावी दायर गर्न सक्छन् र तपाईंलाई $ 150,000 को जरिवाना हुनेछ।
पायरेटेड प्रोग्रामहरू सबै प्रकारका मालवेयरले भरिएका हुन्छन् जसले तपाईंको कम्प्युटरमा आफ्नो बाटो फेला पार्नेछ। भाइरस, ट्रोजन र ransomware ले PC लाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ र तपाईले सबै महत्त्वपूर्ण फाइलहरू सदाको लागि गुमाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, समुद्री डाकूहरूले प्राय: ह्याक गरिएका कार्यक्रमहरूमा मालिसियस कोडहरू एकीकृत गर्छन्। तिनीहरूले सबै डाटा चोरी गर्न सक्छन्, आफ्नो कम्प्युटर र वेबक्याम पनि नियन्त्रण।
उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कार्यक्रमहरू निरन्तर अपडेट भइरहेका छन्। यद्यपि, यदि तपाईं पाइरेटेड फ्री मिडिया एन्कोडरको मालिक हुनुहुन्छ भने, अद्यावधिकहरू तपाईंलाई उपलब्ध हुने छैनन्। अवस्थित संस्करण अद्यावधिक गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्, अन्यथा तपाइँ त्यसको लागि दण्डित हुन सक्नुहुन्छ।
अद्यावधिक नि: शुल्क
पाइरेटेड Adobe Encoder प्रयोग गर्नेहरूको अर्को सामान्य समस्या बारम्बार ढिलो र बगहरू हो। यसले प्रायः हराएको प्रगतिमा परिणाम दिन्छ, केहि काम गर्न प्रयास गर्दा समय बर्बाद हुन्छ र मूड बिग्रन्छ। यदि प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुन्छ भने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्करणको प्रयोगकर्ताले ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्दछ। पायरेटेड संस्करणको प्रयोगकर्तालाई यस्तो अवसर दिइँदैन। थप रूपमा, आफैलाई र तपाइँको पीसी पत्ता लगाउनबाट रोक्नको लागि, तपाइँ कार्यक्रमको केहि अनलाइन सुविधाहरूको फाइदा लिन सक्षम हुनुहुने छैन।
छिटो भिडियो सम्पादन मद्दतको लागि व्यावसायिक भिडियो सम्पादन सेवाहरू
यदि तपाइँ Adobe Media Encoder लाई नि:शुल्क कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सोचिरहनुभएको छ भने, सुरक्षित तरिकाहरू मध्ये एक यसको विकल्पहरू प्रयास गर्नु हो। मैले Adobe Encoder लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने तीनवटा उत्तम विकल्पहरू चयन गरेको छु र पूर्ण रूपमा नि:शुल्क छन्।
HANDBRAKE नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
उल्लेखनीय ढाँचा समर्थन
ब्याच प्रशोधन र प्रिसेटहरूको उपस्थिति
विस्तृत सुविधा सेट
मास्टर गर्न जटिल
HandBrake स्पष्ट रूपमा नौसिखिया प्रयोगकर्ताहरूको लागि होइन, तर यसले प्रयोगकर्ताद्वारा आयात गरिएको कुनै पनि भिडियोसँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्नेछ। यो Adobe Media Encoder विकल्पले इच्छित फाइल आकार र गुणस्तरको भिडियो ढाँचाहरूको एक विशाल चयन प्रदान गर्दछ।
विभिन्न ढाँचाहरूमा भिडियो रूपान्तरणको द्रुत परिणाम प्राप्त गर्न, सबै आवश्यक समायोजनहरू अवस्थित छेउ प्यानलबाट प्रिसेट लागू गर्न सम्भव छ। यसबाहेक, प्रयोगकर्ताले आउटपुट सेटिङ सेक्सनमा धेरै ट्याबहरू मार्फत जान सक्छ, सही एन्कोडिङ प्यारामिटरहरू ट्वीक गर्न, प्रभावहरू थप्न र यस्तै अन्य।
AVIDEMUX नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
भिडियो चयनहरू क्लिप गर्नुहोस्
निर्यातको लागि व्यापक भिडियो ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ
UI खाली गर्नुहोस्
उल्लेखनीय एन्कोडिङ क्षमताहरू
Avidemux भिडियो रूपान्तरणको लागि नि: शुल्क कार्यक्रम हो। यो व्यापक भिडियो ढाँचाहरूको समर्थन र रूपान्तरण अघि खण्डहरूमा भिडियोहरू फिल्टर र काट्ने क्षमताको लागि उल्लेखनीय छ। एकचोटि तपाईंले Avidemux खोल्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई यसको सुविधाहरूमा भ्रमित पार्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं त्यस्ता कार्यक्रमहरूसँग परिचित हुनुहुन्न भने। त्यो किनभने यो भिडियो सम्पादन उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। तर, केहि समय पछि, तपाइँ सम्पूर्ण प्रक्रिया पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ - केवल फाइल मेनु मार्फत भिडियो लोड गर्नुहोस् र इच्छित ढाँचा छान्नुहोस्।
यो नि:शुल्क मिडिया एन्कोडर विकल्पले MPG, MP4, AVI, FLV र अझ धेरै जस्ता फाइल ढाँचाहरू स्वीकार गर्दछ।
उच्च मौसममा छिटो मद्दतको लागि विवाह भिडियो सम्पादन अर्डर गर्नुहोस्।
FORMAT FACTORY नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
तुरुन्तै ब्याचहरूमा फाइलहरू रूपान्तरण गर्दछ
CD, DVD र Blu-rays को लागि डिस्क-रिपिङ उपकरणहरू
धेरै फाइल ढाँचाहरूको लागि समर्थन
नियमित अपडेट र मर्मतसम्भार
विन्डोजमा आधारित मात्र
FormatFactory फाइलहरूलाई विभिन्न ढाँचाहरूमा रूपान्तरण गर्ने एउटा उल्लेखनीय कार्यक्रम हो। यदि तपाइँ साझेदारी प्रक्रियालाई सरल बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यसले तपाइँलाई धेरै मद्दत गर्नेछ, भारी फाइलहरूसँग कम्प्युटर ठाउँ ओगट्नुहोस् वा फाइलहरूलाई निश्चित मिडिया प्लेयरसँग उपयुक्त बनाउनुहोस्। यो Adobe Media Encoder नि: शुल्क विकल्प एक सीधा इन्टरफेस द्वारा विशेषता हो जसले सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक सजिलो रूपान्तरण प्रक्रियाको ग्यारेन्टी गर्दछ, अनुभवको स्तरले फरक पार्दैन।
भिडियो रूपान्तरण गर्दा, "विकल्प" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा सानो भिडियो सम्पादकले तपाईंलाई सुरु र अन्त्य बिन्दुहरू छनोट गर्न वा भिडियो क्रप गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, फोटो र अडियो फाइलहरूको समर्थनको कारण कार्यक्रम बरु विश्वव्यापी छ।
उत्तम नि: शुल्क भिडियो कन्भर्टरहरू।
रङ ग्रेडिङ भिडियो सम्पादन प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल चरणहरू मध्ये एक हो। तर त्यहाँ एक जादुई उपकरण अवस्थित छ तपाईंलाई यो कदम मिनेट भित्र प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्न - एक LUT। यहाँ सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क LUTs को एक चयन छ जुन प्रत्येक पेशेवर भिडियो सम्पादकले आफ्नो निपटानमा हुनुपर्छ।
नि: शुल्क LUTs डाउनलोड गर्नुहोस्
Adobe Media Encoder नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
"Adobe Media encoder फ्री डाउनलोड" लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र 30 दिनको लागि कार्यक्रम परीक्षण गर्ने मौका प्रयोग गर्नुहोस्। सबै प्रिमियम विकल्पहरूको फाइदा लिनुहोस्, साथै हालै जारी गरिएका अद्यावधिकहरू र कार्यहरू।
Adobe Media Encoder लाभहरू
Adobe Photoshop Windows7को लागी डाउनलोड गर्नुहोस्